Articles Archives - Page2of 135 - Kanaung News
မုဒြာ ( ဗုဒ္ဓလက်​​တော်​ဟန်​များ )
မုဒြာ ( ဗုဒ္ဓလက်​​တော်​ဟန်​များ ) သက္ကတဘာသာအားဖြင့်မုဒြာ ပါဠိဘာသာအားဖြင့် မုဒ္ဒ ဟူ၍​ခေါ်သည်​။မုဒြာဆိုသည်မှာ အလွန်နက်နဲ့ သိမ်မွေ့ ၍ အတွင်းငုပ်သော အနက်အဓိပ္ပါယ် သဘောတရားများကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပေသည်။ အချို့ မုဒြာမှာ လက်တစ်ဘက်တည်းဖြင့်သာ ဟန်အမူအရာ ပြခြင်းဖြစ်၍အချို့ မုဒြာမှာမူ လက်နှစ်ဘက်ဖြင့်ဖြစ်စေ လက်လေးငါးဆယ်ဘက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ဟောကြားညွှန်ပြလိုသောသဘောတရားကို ဟန်အမူအရာပြထားခြင်းမျိုး ဖြစ်လေသည်။ (၁) ဗေဒင်ကျမ်းများဆိုင်ရာမုဒြာများ (၂) တန္တရာယာနဆိုင်ရာ မုဒြာများ (၁၀၈) မျိုး (၃) လောကီယ အနုပညာဆိုင်ရာ မုဒြာများ (၆၄)မျိုး ဟူ၍ သုံးပိုင်း သုံးကဏ္ဍ ခွဲခြားထားသည်​။ အသုံးအများဆုံး မုဒြာပေါင်း (၄၅)မျိုး ၁။ အဉ္ဇလီ ၂။ ဝန္ဒနီ ၃။ ယောနိ ၄။ ဝေနာယကီ ၅။ ဟဒယ ၆။ […]
Posted in: Articles, DhammaTagged: Article, DhammaLeaveacomment
ငရဲပြည်မှာ အမှုထမ်းရသော ယမမင်း နှင့်ငရဲအကြောင်း
ငရဲပြည်မှာ အမှုထမ်းရသော ယမမင်း နှင့်ငရဲအကြောင်း ငရဲဘုံရှိ ယမမင်း( ငရဲမင်း ) ဆိုတာ ဘုရားဟော ဟုတ်မဟုတ် နှင့် ယမမင်းနှင့် ငရဲထိန်းတို့သည် အဘယ့်ကြောင့် ငရဲပြည်မှာ အမှုထမ်းရသနည်း ? (မေး)ဆရာတော် အရှင်သူမြတ်ဘုရား…ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လူတစ်ယောက် သေလွန်ပြီးနောက်ထိုလူ သွားရောက် ရမည့် ဘဝကို မေးမြန်းစစ်ဆေးပြီးဆုံးဖြတ်ပေးသည့် ယမမင်း ဆိုသည်ကို ကြားဖူးပါသည်။ယမမင်း ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲ။ဘယ်မှာ နေသလဲ။ဘယ်လို ကုသိုလ် သို့မဟုတ် အကုသိုလ်ကြောင့်ယမမင်း ဖြစ်ရသလဲ။ ယမမင်းဆိုတာကိုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ နှုတ်တော်မှ ဟောကြားခဲ့သလားဆိုသည်တို့ကို သိလိုပါသည်ဘုရား။ယမမင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျမ်းဂန်ထွက် ဗဟုသုတအဖြာဖြာကို မျက်မှောက်ခေတ် အမြင်နှင့်ရောစပ်၍ ဖြေကြားပေးစေချင် ပါသည်ဘုရား။ (ဖြေ)“ယမမင်း”“ရဟန်းတို့၊ ငါဘုရားသည် ဒိဗ္ဗစက္ခုညာဏ်ဖြင့်ငရဲသို့ကျ ရောက်သော သတ္တဝါတို့ကို မြင်တော်မူ၏။ လူ့ဘဝတွင် မကောင်းမှုကို ပြုသောကြောင့်ငရဲသို့ရောက် […]
“ မိဘဂုဏ်(၁၂)ပါး ”
“ မိဘဂုဏ်(၁၂)ပါး ” မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့သောသောဏနန္ဒဇာတ်လာမိဘဂုဏ်(၁၂)ပါး….. ၁။ မိဘ ဆိုတာ ကိုးကွယ်ရာ ဗြဟ္မာဖြစ်တော့သည်။ ၂။ သွန်သင်ပြသ ဆိုဆုံးမ မိဘ ဆရာ ဖြစ်တော့သည်။ ၃။ အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ် မိဘဆို လှူကို လှူရမည်။ ၄။ အိမ်စောင့် အိမ်ဦး နတ်မြတ်ထူး အထူးပူဇော်မည်။ ၅။ ခြင်ဆီရိုးထဲ လွန်စွာကဲ ချစ်လည်းချစ်ကြသည်။ ၆။ မွေးဖွားပို့ဆောင် ဤလူ့ဘောင် ဂုဏ်ရောင်လင်းစေသည်။ ၇။ နို့ချို တိုက်ကျွေး မွေးမြူပေး အလေးထားရမည်။ ၈။ ယုယ ကြင်နာ ပိုးပမာ မွေးရှာခဲ့ကြသည်။ ၉။ ပူပန်ကြီးစွာ စောင့်ရှောက်ကာ ကာကွယ်ပေးကြသည်။ ၁၀။ လောကအကြောင်း လူ့အကြောင်း ကောင်းကောင်းညွှန်ပြသည်။ ၁၁။ ယုယပိုက်ထွေး […]
Posted in: Articles, Dhamma, KnowledgeTagged: Article, Dhamma, KnowledgeLeaveacomment
ကိုယ် ဘယ်လိုလူလဲ ညီလွင် တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာပြီး သူသိချင်တာတွေကို အစ ဆွဲထုတ်ပြန်ပါတယ် ။” အကို ၊ အကို အရင် ရေးဖူးတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပါ ဆိုတာကို ရော နည်းနည်းလောက်ထပ်ရှင်းပြပေးပါလား အကို ။ ဒါကို ရော ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်သင့်လဲ ရွေးချယ်ရာမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာလား ? ” ” အင်း ဒါက ဒီလို ရှိတယ်ညီရ ။ အရင်က အကိုတို့ ဆွေးနွေး လိုက်တဲ့ အဓိက အချက် ၂ ချက် ရှိတယ်လေ ။ ၁။ ကိုယ် ဝါသနာ ပါတာကို သေချာရှာဖို့ ( ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညာမိဖို့ ) […]
Posted in: Articles, KnowledgeTagged: Article, KnowledgeLeaveacomment
အားသာချက် ကိုရှာ မနေ့ကတင်ခဲ့ပေးတဲ့..ကိုဇင်ဇေရဲ့ မိမိဝါသနာကိုရှာဆိုတဲ့စာရဲ့အဆက်ပါ။တကယ်လို့ဝါသနာကိုရှာလို့ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့……. ” အကို အဲလို ဝါသနာကို ရှာတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ ။ တကယ်လို့ မတွေ့ရင်ရော တခြား နည်းလမ်းတွေရှိသေးလား အကို ကိုယ့် အနာဂတ် အတွက် ဘာလုပ် သင့်တယ် ဆိုတာ ကို သိဖို့ပေါ့ ။ ” ညီလွင် က ဝေခွဲမရစိတ် ၊ သိချင်စိတ်တွေ ရောပြွန်းနေတဲ့ ပုံစံ နဲ့ ထပ်မေးပါတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ မေးခွန်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေကြည့်မိတယ် ။ ” အင်း ရှိတယ် လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့ညီ ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကိုယ် တကယ် ဝါသနာ ပါတာ / ကိုယ် […]
ဝါသနာ ကို ဘယ်လို ရှာ ရ မှာ
ဝါသနာ ကို ဘယ်လို ရှာ ရ မှာ ” ဒီလို စဉ်းစားကြည့်ကွာ ညီရာ … ညီ အခုလောလောဆယ် ကိုယ် တကယ် လုပ်ချင်တာ ဖြစ်ချင်တာ ဘာလဲဆိုတာ မသိရင် ညီ ဘာ ဝါသနာ ပါလဲ ? ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ် ဘာကို စိတ်ဝင်စားသလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ သေချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါလား ? ” ” အဲဒီ ဘာ ဝါသနာ ပါလဲ ဆိုတာကို ကို စဉ်းစားလို့ မရတာ အကို ။ ကျွန်တော် ထင်တာ ကျွန်တော်က ဘာမှ ဝါသနာ မပါသလိုပဲ ။ ဒီလို ပဲ […]
အောင်မြင်သူနဲ့ စိတ်ခွန်အား ဒီအလုပ်ဟာအောင်မြင်မယ်လို့ သင့်စိတ်ထဲမှာယုံကြည်နေရင်ဒီအလုပ်မှာ သင်ဟာအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်….အောင်မြင်ချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် မိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့ မဆုတ်မနှစ် ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်မှာစိတ်ဓါတ်အင်းအားပြည့်ဝနေဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်…..စိတ်ဓါတ်ခွန်အား မပြည့်ဝတဲ့ သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် အောင်မြင်မူရဖို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး……စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပြည့်ဝနေတဲ့သူဆိုတာ မိမိအလုပ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းတတ်ကြွရွှင်လန်းနေတဲ့သူ၊ မိမိအလုပ်ကိစ္စတိုင်းအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့သူ ၊စိတ်ဓါတ်တတ်ကြွနေတဲ့သူ၊ အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူကို ပြောတာပါ။စိတ်ဓါတ်ခွန်အားလျော့နေသူဆိုတာ စိတ်လေနေသူ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသူ၊ အခက်အခဲကိုကြောက်ရွံ့သူ၊ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းနေတတ်သူ၊တတ်ကြွရွှင်လန်းတဲ့စိတ်မရှိတဲ့သူ ၊ အရာရာကို အဆင်သင့်မဖြစ်တဲ့သူ ၊ အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မို့ရွှေ့ဆိုင်းနေတဲ့သူဟာ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားလျော့နည်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပြည့်ဝနေတဲ့သူဖြစ်ပြီး ၊ မအောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာကတော့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားလျော့နည်းနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူအဆိုအမြဲတမ်း စိတ်ဓါတ်ခွန်အား မပြည့်ဝနိုင်သလို အမြဲတမ်းလျော့နေသူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်ချသ်တဲ့တစ်ယောက်ဖ်ြစဖို့ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်း စိတ်ခွန်အားပြည့်ဝနေရပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ခွန်အားလျော့နည်းနေသူ တစ်ယောက်အနေဖြင့် မည်သည့်အောင်မြင်မူများကိုမှ ရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ…လူတစ်ယောက်၏စိတ်ဓါတ်အင်အားကို အဓိကအပြောင်းအလဲဖြစ်စေသောအရာမှာ မိမိကိုယ်စိတ်နှင့် ၀န်းကျင်အနေအထားတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်… ပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခက်မှုဒဏ်ထို့အတွက်ကြာင့်လည်း စိတ်ဓါတ်ခွန်အား ပြည့်ဝစေပါတယ်…ထို့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခက်မှုဒဏ်တွေ တိုက်ခက်တိုင်းသာစိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေလျော့ဆင်းပြီး မိမိရဲ့ […]
Posted in: ArticlesTagged: ArticelsLeaveacomment
မက်ကလောင် ခြစ်ခြင်း ရှေးယခင် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ဖျားနာကိုက်ခဲတဲ့အခါ မက်ကလောင်ခြစ်နည်းကို အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ မက်ကလောင်နည်းဟာ တရုတ်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပညာကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ တရုတ်အပ်စိုက်ကုထုံးရဲ့ အစွယ်အပွားနည်းတခုလည်း ဖြစ်တယ်။ မက်ကလောင်ခြစ်နည်းကို တရုတ်(mandarin)စကားအရ “Gua Sha” လို့ ခေါ်ပါတယ်။”Gua”ဆိုတာ “ခြစ်ထုတ်သည်”လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး “Sha”ဆိုတာ “အနီကွက်ထခြင်း” ဖြစ်ပါတယ်။မက်ကလောင်ခြစ်တဲ့အခါ သွေးခြေဥပြီး အနီကွက်ထလာသည်အထိ အရေပြားကို ကုပ်ခြစ်ပေးရပါတယ်။ တရုတ်သီအိုရီအရ မကောင်းတဲ့ သွေးပုပ်တွေ စုအောင်းနေတာကို သန့်ရှင်းအောင် ခြစ်ထုတ်ပေးရတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်တယ်။ တရုတ်ဆေးပညာအရ အဖျားရောဂါ၊တုပ်ကွေး၊အအေးမိ၊ချောင်းဆိုး၊ပန်းနာ၊ရင်ကျပ်၊ခေါင်းကိုက် စတဲ့ဝေဒနာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတယ်။ အရိုးနဲ့ကြွက်သား နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကိုလည်း ပြေပျောက်စေတယ်။ ဒါ့ပြင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း အားပေးတယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြတယ်။ မက်ကလောင်ခြစ်နည်းကို တရုတ်အပါအဝင် ထိုင်ဝမ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်၊လာအို၊ထိုင်းစတဲ့ အာရှတိုက်နိုင်ငံတွေမှာ အိမ်သုံးနည်းအဖြစ်သုံးစွဲကြပါတယ်။ […]
Posted in: Articles, HealthTagged: Article, HealthLeaveacomment
ပုညကြိယာ ၀တ္ထု ၁၀ပါး
ပုညကြိယာ ၀တ္ထု ၁၀ပါး သူတော်ကောင်းတို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုကျင့်ရာဖြစ်သော ပုညကြိယာ ၀တ္ထု ၁၀-ပါး ပုညကိရိယ = ပြုထိုက်သည့် ကောင်းမှု၊ ဝတ္ထု = ကောင်းကျိုးတို့၏ တည်ရာ၊ ပုညကိရိယ ဝတ္ထု = ကောင်းကျိုးတို့၏ တည်ရာဖြစ်၍ ပြုထိုက်သည့် ကောင်းမှုများ။ ၁။ ဒါန၊ စွန့်ကြဲ ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်း။ ၂။ သီလ၊ ကိုယ်ကျင့်သီလ ကောင်းအောင် စောင့်ထိန်းခြင်း။ ၃။ ဘာဝနာ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအားထုတ်ခြင်း။ ၄။ အပစာယန၊ ရိုသေထိုက်သူတို့ကို ရိုသေခြင်း။ ၅။ ဝေယျာဝစ္စ၊ ကုသိုလ်ရေးတို့၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၆။ ပတ္တိဒါန၊ မိမိပြုလုပ်သောကုသိုလ်ကို သူတစ်ပါးအား အမျှပေးဝေခြင်း။ ၇။ ပတ္တာနုမောဒနာ၊ သူတစ်ပါး ပြုလုပ်သောကုသိုလ်ကို ၀မ်းမြောက်ခြင်း။ […]
Posted in: ArticlesTagged: ArticlesLeaveacomment
မေတ္တာပို့စဉ် စိတ်ထားနည်း စူးရှအောင် အဘယ်သို့ မေတ္တာဖြန့်ရပါမည်နည်း။ မေတ္တာဖြန့်ရာတွင် ရည်ညွှန်းသော သြဒိသမေတ္တာ မရည်ညွှန်း သော အနောဓိသမေတ္တာနှစ်မျိုးရှိရာ အနောဓိသမေတ္တာထက် သြဒိသမေတ္တာကစူးရှသည်။ သြဓိသတွင်လဲ မြင်ဖူးသူ မမြင်ဖူးသူရှိပြန်ရာ မမြင်ဖူးသူထက် မြင်ဖူးသူကို စူးရှသည်။ မြင်ဖူးသူတွင်လဲ အမြင်နည်းသူထက် အမြင်များသူကို စူးရှသည်။ အမြင်များသူတွင်လဲ အကျွမ်းမဝင်သူထက် အကျွမ်းဝင်သူကို စူးရှသည်။ အကျွမ်းဝင်သူတွင်လဲ နေ့အခါထက် ညအခါ စူးရှသည်။ ညအခါတွင်လဲ မေတ္တာအပို့ခံရသူက လှုပ်ရှားနေသူ ထက် ငြိမ်နေသူကို စူးရှသည်။ ငြိမ်နေသူတွင်လဲ အမှတ်တမဲ့ဖြန့်ခြင်းထက် ချိန်၍ ဖြန့်ခြင်းက စူးရှသည်။ သို့ဖြစ် လေရကား မကျန်းမာ၍ဖြစ်စေ တစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်စေ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့နေသူအား နေ့ရက် အချိန် မျက်နှာပုံ နေထိုင်ပုံစသည်တို့ကိုသိအောင် ချိန်းဆိုပြီး ထိုသူ၏ နှလုံးအိမ်ကိုဖြစ်စေ ခံတွင်းပေါက်ကိုဖြစ်စေ […]